Mabhuku aAgatha Christie anongedzera kunoverengera yetikitivha. | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Vanyori, Type, Literature, Nhema nhema
Agatha Christie: Featured Mabhuku.
Kana iwe wakatsvaga pawebhu kutsvaga mazwi "Agatha Christie mabhuku," unoda basa rakanaka rehutikitivha. Munyori anotariswa nevanoongorora mabhuku sechiratidzo yeruzivo nhema, iyo yakafara greycale nyika. Chimiro chaChristie chinobatanidza zvinhu zvakajairika zvechitaera Sherlock Holmes, kunyangwe aine bata rakakura kwazvo uye nesimbi, kunyangwe kwaari. Ma protagonists ayo anoratidza hukuru hunoshamisa, hushingi, hutsinye, kuzvimiririra uye idiosyncrasy, hunhu huripo - semuenzaniso- mune imwe yenyaya dzayo dzinozivikanwa kwazvo: Hercule Poirot.
Christie (Gunyana 15, 1890 - Ndira 12, 1976) Akazvarwa muTorquay, Devon, Great Britain. SZita rake rakazara ndiAgatha Mary Clarissa Miller. Aive wekupedzisira pahama nhatu kubva kumuchato pakati paFrederick Alvah Miller naClara Boehmer.
2 Kutanga kuburitsa
3 Zvinyorwa kubudirira uye kurambana
4 Kuuya kutsva kwerudo neHondo Yenyika II
5 Agatha Christie: Mabhuku uye Kufamba
Hwehudiki hwake hwakapedzwa muAshfield, mune imwe imba yakakomberedzwa neuswa nemiti.. Iyi nzvimbo yaizokurudzira vazhinji vezviitiko zvematsotsi akarondedzerwa mumanovel ake, nevagari vakadzikama - zviri pachena - asi vachikwanisa kuuraya zvine hunyanzvi uye neropa rinotonhora (kuti vagamuchire nhaka inonaka kana kubvisa murume anotsamwisa).
Kukura kwake kwaive kwemumwe musikana wechiBritish aive weboka rakapfuma. Akagamuchira kurairirwa kumba kubva kuvabereki vake uye nevadzidzisi vega. Akadzidza kuimba, kushongedza, kubika, uye gadheni. Munguva iyoyo akaverenga ngano zhinji, Dickens naConan Doyle. Akafambawo zvakawanda, ari Riviera neEjipitori mbiri nzvimbo dzakamuratidzira zvakadzama.
Baba vake vaive bourgeois anobva kuNew York uye amai vake mukadzi akachangamuka uye ane tsika Chirungu aishingairira mukuumbwa kwevechidiki Agatha uye akamukurudzira kunyora kubva achiri mudiki. Panguva iyoyo akavaka mavara zvichienderana nevatikitivha vekare venguva yake, asi zvishoma nezvishoma akawedzera hunhu hwake. Kusvika pabasa rake, pane huwandu hwakawanda hwekuda kuziva.
Agatha Christie anotora mazwi.
Muna 1912 akasangana ndokuvimbisana naVaArchibald Christie, waakaroora makore maviri akatevera.. Murume wake aive mutyairi wendege, achibatana neFrench Army munguva yeHondo Huru, Agatha achizvipira kuTorquay Red Cross Hospital. Ichi chiitiko chakamubatsira kuti aongorore psychology yevanhu, yakatsanangurwa zvine hunyanzvi gare gare mumanovel ake.
Agatha Christie akapihwa kuchipatara chipatara pakapera hondo, ndipo paakatanga kusangana nechetura hwaaizoshandisa mune nyaya dzake. Saizvozvo, iye akazove muverengi wenguva dzose wemitambo yemapurisa yaDoyle naChesterton. Hondo ichiri kupera akatanga kunyora bhuku rake rekutanga, Nyaya Isinganzwisisike Yemastaera, achitarisa mutikitivha wake waanoda Poirot.
Iyo inoverengeka yakaburitswa muna 1920 neBodley Head Publishing., anobva kuLondon, nekuda kwaJohn Lane, mushure mekurambwa nevaparidzi vanosvika vatanhatu vakasiyana. Chibvumirano chekutanga icho hachina kubatsira zvakanyanya kumunyori, asi aifara kuti zvirinani kuti zvibudiswe. Nekudaro, mushure mekuteedzera mamwe mana maanovhhero akabvumirana, akafunga kutsvaga mamiriro ari nani.
Mushure mehondo, Christie akafamba nemuSouth Africa, Australia, New Zealand, Canada neUnited States, nenzira iyi, akawana ruzivo rwakawedzerazve basa rake. Pamusoro pe, pakati pa1921 na1925 akaburitsa nyaya pfupi zhinji mumagazini (makore akazotevera vakaunganidzwa mumavhoriyamu) izvo zvakamutendera mari itsva nguva dzose.
Saizvozvowo, mukati memakore iwayo akanyora mabhuku aizove akabudirira makumi mashoma emakore gare gare, pakati peavo vanogona kutumidzwa mazita Mhondi muConnections (1923), Iye murume ari muBrown Sutu (1924) uye Chakavanzika Chakavanzika (1925). Kunyangwe zvingave zvakadaro Muvengi Akavanzika (1922) inonyanya kuzivikanwa nehurongwa hwayo hwakaomarara pakati pevasori. Panguva iyoyo akabata mwanasikana wake Rosaleen.
Munyori Agatha Christie.
Zvinyorwa kubudirira uye kurambana
Kuurayiwa kwaRogelio Ackroyd Yaiva zita renhoroondo yekutsvagisa iyo muna 1926 yakapa Agatha mukurumbira wakasarudzika, uyo mukati megore rimwe chete akasarudza kunyatso shandisa zita remurume wake sezita rekunyora. Nderimwe remabasa ake akakurumbira; inogara ichibatanidza kushamisika zvinhu uye manyepo anotungamira, kutanga nemunyori, Dr. Sheppard, anozopedzisira ave mhondi.
Makore akatevera aive akanyongana kumunyori, nekuti aifanira kubata nerufu rwaamai vake uye nekushushikana kwakazotevera. Nguva pfupi yapfuura akarambana, muna 1928, nekuti murume wake akamusiya kune mumwe mukadzi. Rutsigiro rwake chete panguva dzakaoma idzi kwaive kunyora uye nemwanasikana wake Rosaleen, waakagara naye kwerinenge gore nehafu muCanary Islands.
Pasinei nemamiriro ezvinhu, Agatha Christie akakwanisa kuburitsa mamwe akawanda mabasa: Makuru mana (1927), Chakavanzika cheBlue Chitima (1928), Zviratidzo Zvinomwe Zvakavanzika (1929), Kuuraya muVilla del Vicario (1930) uye Iyo Giants 'Jam (1930 - pasi pezita raMaria Westmacott, inoshandiswa kune nyaya dzerudo, kunyanya).
Kuuya kutsva kwerudo neHondo Yenyika II
Munguva yerwendo rwekuIraq muna 1930 Agatha akasangana naMax Mallowan, inozivikanwa yezvinocherwa mumatongo uyo waakazoroora. Akanga ari mudiki kwaari makore gumi, nekuda kweichi chikonzero munyori pakutanga aizeza kubvumirana muchato wechipiri, asi akazobvuma. Kubva ipapo zvichienda mberi, aiperekedza murume wake kunzvimbo dzakasiyana kuGreek, Syria neIraq, iye achichera iye achibatsira nemifananidzo iyi.
Asi roorano inofara yaizokanganiswa vazhinji veHondo Yenyika II., saProf. Mallowan akaita semupi wezano wezvechiArabhu kuBritish Mauto kuNorth Africa, nekuda kwekuziva kwake mutauro uye tsika dzeMiddle East.
Munguva yekukonana, munyori akanyorera semuzvipiri kuLondon University College Hospital. Munzvimbo iyoyo yehutano akanyora achishingairira, kwaive nemabasa mazhinji akagadzirwa ayo mamwe anofarira Muurayi akarara (1976) akachengetedzwa kuburikidza negwaro rake rekunyora kuti aburitswe mushure mekufa kwake. Mamwe mazita akatanhamara kubva gumi iro aive Mutumbi uri muRaibhurari (1942), Rufu Runosvika Kumagumo (1944) uye Kusavapo muChirimo (1944 - seWestmacott).
Agatha Christie: Mabhuku uye Kufamba
De Iko kungogara kuchinjirwa kwakamukurudzira kuti agadzire mazhinji enzvimbo dzake kuitira rake ramangwana mabhuku.. Saka, dzakabuda — pakati pemamwe mazita mazhinji- Kuuraya paMabvazuva Express (1934), Kuuraya muMesopotamia (1936), Rufu paNire (1937) uye Zuva neRufu: Chakavanzika chePoirot (1938).
Kusvikira parufu rwake Agatha Christie akaramba achigara achinyora asingaverengeke mabhuku uye pfupi nyaya, mazhinji acho achitarisa Hercule Poirot, uyo waakapa mugumo wake unokudzwa Keteni (yakaburitswa muna 1975, asi yakanyorwa muma40).
"Kuuraya kuri nyore", rimwe remabhuku aAgatha Christie.
Uye zvakare, munyori akaburitsa uye akatarisa mitambo ine mukurumbira yakadai se Iyo Mousetrap (1952). Mune zvese, mabhuku aAgatha Christie atengesa anopfuura makopi emamirioni mazana matatu, apfuura nemuzvinyorwa zvakawanda, uye akashandurwa mumitauro inodarika makumi maviri nesere.
Basa rake rakaumba iyo best seller zvinonyanya kukosha mumutikitivha genre genre, nemitambo yakawanda mumitambo, firimu uye terevhizheni. Vashoma vanhu munyika yanhasi vakasangana zvakananga kana zvisina kunangana nenhaka yavo yehungwaru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Agatha Christie: mabhuku
Ingojekesa kuti Agatha Christie haana kumbobvira anyora mhosva yematsotsi, yake inyanzvi yekuongorora kana enigma.
Ndiri kuverenga makesi masere ePoirot, ndave kutopedza.
Pindura kuna ALLAN
Muti wezivo, naPío Baroja. Ongororo pfupi.